Wholesale Kusiyanisa kumanikidza kuyerera kwemamitha Mugadziri uye Mutengesi | ANGJI
Thermal gasi mashoma kuyerera mita
Precession vortex kuyerera mita
Turbine kuyerera mita
Vortex kuyerera mita
Kusiyanisa kumanikidza kuyerera mita
Kuyerera rate totizer
Kutonhora kupisa totizer
Fuel yekushandisa counter
XJXW Series Kuyerera Meter
Smart multimeter parameter inoyerera mita inosanganisa kusiyanisa kumanikidza zvinofambisa, kutora tembiricha, kumanikidza kutora, uye kuyerera kuunganidzwa kuratidza kumanikidza kwebasa, tembiricha, ipapo, uye kuwedzera kuyerera munzvimbo. Iyo gasi uye chiutsi zvinogona kungoerekana zvabhadharwa tembiricha uye kumanikidza kuti uone basa rekuratidzira muyero kuyerera uye kuyerera kwakawanda panzvimbo iyi. Uye inogona kushandisa yakaoma bhatiri basa, inogona kushandiswa zvakananga neiyo kusiyanisa kumanikidza kuyerera mita.
Smart multimeter parameter inoyerera mita inosanganisa kusiyanisa kumanikidza zvinofambisa, kutora tembiricha, kumanikidza kutora, uye kuyerera kuunganidzwa kuratidza kumanikidza kwebasa, tembiricha, ipapo, uye kuwedzera kuyerera munzvimbo Iyo gasi uye chiutsi zvinogona kungoerekana zvabhadharwa tembiricha uye kumanikidza kuti uone basa rekuratidzira muyero kuyerera uye kuyerera kwakawanda panzvimbo iyi. Uye inogona kushandisa yakaoma bhatiri basa, inogona kushandiswa zvakananga neyakasiyana kumanikidzwa kuyerera mita.
1.Liquid crystal lattice Chinese mavara anoratidza, intuitive uye nyore, yakapusa uye yekumisazve oparesheni;
2.Equipped pamwe asiri kuonana rinobva Data Kurongwa, pasina kuvhura butiro, njodzi uye nyore;
3.Inogona kuve nehukama nemhando dzakasiyana dzekumanikidza kumanikidza kuyerera maseru (senge orifice ndiro, V-koni, Annubar, gokora uye mamwe masiyano ekumanikidza maseru);
4.With tembiricha / yekumanikidza sensor interface, yakasimba kuchinjika Inogona kuve yakabatana nePt100 kana Pt1000, kumanikidza kunogona kusunganidzwa negeji yekumanikidza kana yakakwana yekumanikidza sensor, uye inogona kushandurwa muzvikamu; (kusarudza);
5. Kuyera huwandu hwenhau, hunogona kuyera hutsi, mvura, gasi, nezvimwe;
6.With yakanakisa isina mutsetse kururamisa basa, inatsiridza zvakanyanya chishandiso mutsara.
7. Chiyero che1: 100 (zvakasarudzika zvinodiwa zvinogona kuva 1: 200);
8.Iine yakazara-inoratidzwa HART protocol, kure paramende kumisikidza uye kugadzirisa debugging; (kusarudza);
9.Iyo inoshandura inogona kuburitsa frequency pulse, 4 ~ 20mA analog chiratidzo, uye ine RS485 interface, inogona kuve yakabatana yakanangana nekombuta, iyo yekufambisa nzvimbo inosvika ku1.2km; (kusarudza);
Mutauro unogona kusarudzwa, pane mhando mbiri muChinese neChirungu;
11.Iyo parameter iri nyore kumisikidza, inogona kuchengetedzwa zvachose, uye inogona kuchengetedza kusvika kumakore matatu enhoroondo dhata;
12.Ultra-yakaderera simba rekushandisa, yakazara yakaoma bhatiri mashandiro ebasa inogona kuchengetwa kweanenge makore matatu;
13.Iyo modhi yebasa inogona kuchinjika otomatiki, bhatiri-inofambiswa, maviri-waya sisitimu;
14.Newe wega-bvunzo basa, hupfumi hwekuzviongorora-wega ruzivo, mushandisi-inoshamwaridzika kuchengetedza uye kugadzirisa dambudziko;
15.Ine yakazvimirira password password, anti-kuba basa rakavimbika, parameter, yakazara reset uye calibration inogona kumisikidza akasiyana mazinga epassword, mushandisi-ushamwari manejimendi.
16.Display zvikamu zvinogona kusarudzwa, zvinogona kugadzirwa;
Electrical performance index
Simba rekushanda A. magetsi: 24VDC + 15%, ye4 ~ 20mA kuburitsa, kupomba kubuda, alarm kuburitsa, RS-485 nezvimwe.
B. yemagetsi magetsi: 1 mapoka e3.6V lithium bhatiri (ER26500) inogona kushandiswa kweanopfuura makore maviri, kana iyo voltage iri pasi pe3.0V, iyo yekusavimbika chiratidzo
Simba rekushandisa rese muchina A. kwokunze magetsi: <2W
B. bhatiri magetsi emagetsi: avhareji simba rekushandisa re1mW, rinogona kushandiswa kweanopfuura makore maviri
Simba rekushandisa rese muchina A. frequency kuburitsa, 0-1000HZ kuburitsa, inoenderana ipapo kuyerera, iyi paramende inogona kumisikidza bhatanihigh mwero unopfuura makumi maviriV uye yakaderera nhanho isingasviki 1V
A. frequency kuburitsa, 0-1000HZ kuburitsa, inoenderana ipapo kuyerera, iyi paramende inogona kumisikidza bhatanihigh mwero unopfuura makumi maviriV uye yakaderera nhanho isingasviki 1V
RS-485 kutaurirana (photoelectric kusarudzika) uchishandisa RS-485 interface, inogona kuve yakanangana neyakagamuchirwa komputa kana iwo maviri ari kure tafura yekuratidzira, yepakati tembiricha, kumanikidza uye yakajairwa vhoriyamu kuyerera uye yakaenzana netembiricha uye kumanikidza muripo mushure mehuwandu hwehuwandu
Kuwirirana 4 ~ 20mA standard yazvino chiratidzo (fotoelectric kusarudzika) uye yakajairwa vhoriyamu yakaenzana kune inoenderana 4mA, 0 m3 / h, 20 mA inoenderana neepamusoro mwero vhoriyamu (kukosha kwacho kunogona kuiswa padanho menyu), standard: waya mbiri kana matatu waya, iyo flowmeter inogona otomatiki kuziva iyo yakaiswa module maererano neyazvino chaiyo uye inobuda
Pashure: Vhoriyamu Corrector
Zvadaro: XJXW Series Kuyerera Meter
Kusiyanisa Pressure Kuyerera Meter
Kusiyanisa Pressure Kuyerera Inoendesa
Yakakwira Pressure Inoyerera Meter
Pressure Kuyerera Meter
Kero: Kamuri 201, Floor 2, Block 14, No. 85 Mingnan mugwagwa, Songjiang dunhu, Shanghai, China